Tag: raadadka maqalka | Martech Zone
Tag: dhageysiga codka
Sida Loo Adeegsado Kulan Ballaaran si loogu Diiwaan Galiyo Marti Fog Podcastkaaga Goobaha Kaladuwan
Jimco, Juun 23, 2021 Jimco, Juun 23, 2021 Douglas Karr
Kuuma sheegi karo dhammaan aaladaha aan adeegsaday ama aan ku qorey waagii hore si aan ugu duubo wareysiyada Podcast meel fog - oo aan dhibaatooyin kala kulmay dhammaantood. Macno malahan sida wanaagsan ee isku xirnaanshahaygu u fiicnaa ama tayada qalabka… arrimaha isku xirnaanta iyo kaladuwanaanta iyo tayada maqalka ayaa had iyo jeer iga dhigtay inaan tuuro Podcast-ka. Qalabkii ugu dambeeyay ee wanaagsan ee aan adeegsaday wuxuu ahaa Skype, laakiin qaadashada dalabka ma aheyn mid baahsan sidaa darteed aniga
Adeegsiga Caadiga ah GarageBand si loo saxo Qalabkaaga Maqalka Hooseeya
Isniin, Oktoobar 31, 2016 Douglas Karr
Waxaan ka dhisnay istuudiyaha 'podcast' cajiibka ah Indianapolis oo leh qalab casri ah oo casri ah iyo makarafoono tayo leh istuudiyaha. Hase yeeshe, ma shaqeynayo barnaamij gaar ah. Kaliya waxaan si toos ah ugu soo saaraa wax soosaarka makiinadda Garageband halkaas oo aan ku duubo qaddiyad kasta oo mikro-ga ah oo lagu raadsado waddo madax bannaan Laakiin, xitaa iyada oo wax soo saarkayga waxsoosaarka ah ee USB-ga la kordhiyo, codka si fudud kuma soo galo mug wanaagsan. Garageband gudahiisa waxaan ku kordhin karaa mugga raad kasta, laakiin markaa ma sameyn karo